विदेशी मुद्रा कर्जा के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki विदेशी मुद्रा ऋण
विदेशी मुद्रा ऋण के हो?
यदि तपाईंलाई पैसा चाहिन्छ र यहाँ ब्याज अझै उच्च छ, हुन सक्छ विदेशी मुद्रा ऋण लागू हुन्छ। अंतर यो छ कि पैसा तपाईंको मुद्रा को मुद्रा मा भुक्तानी गरिन्छ, तर विदेशी मुद्रा ऋण लिइएको देश को मुद्रा मा चुकाएको छ। अब, यी भुक्तानी उपायहरूले उच्च मूल्यको लागि पनि नेतृत्व गर्न सक्छ। किनकि यो दैनिक परिवर्तन गर्दछ।
विचार गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि यो अर्को मुद्रामा ऋण लिन लायक छ कि छैन। यसको अतिरिक्त, यो क्रेडिट 50.000 यूरोको न्यूनतम रकमको साथ मात्रामा हुनुपर्छ। त्यसैले तपाईंले पहिले नै सोच्नु हुँदैन कि तपाईलाई पैसा चाहिन्छ, तर तपाइँ कसरी फिर्ता तिर्न चाहानुहुन्छ। विदेशी मुद्रा ऋणमा राम्रो छ कि त्यहाँ धेरै प्रश्नहरू सोध्दैनन्। यद्यपि, तपाईले संक्रामक प्रदान गर्नु पर्दछ भन्दा भन्दा अधिक छ ऋण रकम यद्यपि यदि तपाईं यो सम्भावनालाई विचार गर्नुहुन्छ। प्रायः सामान्यतया यो मामला हो कि मान्छे निराशा मा एक क्रेडिट सल्लाहकार को रूप मा जान्छ।
के तपाईको क्रेडिट मूल्याङ्कन खराब छ?
यदि गृह बैंकले भने र कुनै पनि अझै इच्छालाई पूरा गर्न चाहँदैन भने, विदेशी मुद्राको ऋण राम्रो विकल्प हो। त्यहाँ धेरै मानिसहरू एक प्रतिबद्धता प्राप्त गर्छन्। यो क्रेडिट परिवारका लागि राम्रो छ, तर उद्यमीहरू पनि। जो कोहीलाई पैसा चाहिन्छ र अनुप्रयोग मार्गमा विश्वास गर्दैन भने यहाँ निश्चित सल्लाह हुनेछ। ऋण राम्रो कुरा हो। एउटा अझै पनि मौका छ। खास गरी मान्छे जसले जान्दछन् कि उनि ऋण फिर्ता गर्न सक्छन् विदेशी मुद्रा ऋण संग राम्रो सल्लाह दिएका छन्। यस्तो ऋण एक वास्तविक विकल्प हो किनभने सबै सम्भावनामा दरहरू कम छ। यसैले, कुनै विदेशी मुद्रा ऋण को लागी आवेदन गर्दा कुनै पनि गलत छैन। सबैले पैसा बचत गर्न र ठूलो पक्षमा गर्न सक्दछन्। ऋण लागु गर्न पनि सजिलो छ।
मैले विदेशी मुद्रा ऋण कहाँ प्राप्त गर्न सक्छु?
यो आज आज इन्टरनेटमा गर्न सकिन्छ। त्यहाँ थुप्रै साइटहरू छन् जहाँ तुलनात्मक सार्थक हुन सक्छ। यसको अलावा, तुलनात्मक पोर्टलहरू क्रेडिटमा नजिकको हेर्न लिन खोज्न सकिन्छ। सबैलाई निश्चित छ कि उसले केही गलत गर्दैन। विदेशी मुद्रा ऋण यहाँ ऋण संग तुलना गर्न सकिँदैन, तर त्यहाँ रहेका चीजहरू पनि छन्। कुनै पनि अवस्थामा, विदेशी मुद्रा ऋण को चुक्याउने अवधिको अवधि निर्धारित हुन्छ। यो अवधि पनि तपाईं द्वारा अवलोकन गरिनुपर्दछ। यदि तपाईंले भुक्तानीको साथ कठिनाइको सामना गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया यो संकेत गर्नुहोस्। किनकि यदि तपाई इमानदार हुनुहुन्छ भने तपाईले पनि मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ। विदेशी मुद्रा ऋण पनि प्रयोग गरिन्छ क्रेडिट कल भनिन्छ।
यो अब पैसा उधारो गर्न को लागी एक राम्रो तरिका हो र कमिशन वा तपाईंको घरको बैंकलाई सोध्नु पर्दैन। क्रेडिट प्रक्रिया सामान्यतया असामान्य चलिरहेको छ। तपाईंसँग राम्रो संपार्श्विक हुनु पर्छ। यस्तो संपार्श्विक हुन सक्छ घर वा एक निजी डुङ्गा। कुनै पनि अवस्थामा, मान क्रेडिट मान भन्दा बढी हुनुपर्दछ। तर तपाई अझै पनि विचार गर्नुपर्दछ कि तपाईलाई वास्तवमा यो पैसा चाहिन्छ। केवल राम्रोसँग वजन गर्नेहरूले राम्रो निर्णय गर्न सक्छन्। जो कोहीलाई जान सक्छ र यो पनि राम्रो छ। यसका लागि, यो चाँडै स्पष्ट छ कि क्रेडिट एक राम्रो समाधान हो कि होइन र तपाईसँग अझै पनि अन्य विकल्पहरू छन्। कसैले यो प्रयास गर्न सक्छ। कुनै पनि मामला मा, यदि तपाईं यस्तो ऋण प्राप्त गर्न को लागि एक राम्रो मौका चाहान्छ पनि एक नौकरी पनि गर्नुपर्छ।
अघिल्लो लेखखाली क्रेडिट
अर्को लेखव्यावसायिक ऋण